China TYS165-3 Bulldozer Emeputa na Nweta | Xuanhua
TYS165-3 bulldozer bụ 165 horsepower track-type dozer na hydraulic kpọmkwem draịva, ọkara-isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik na-enyere aka na-arụ ọrụ, ọkwọ ụgbọ mmiri na-anya ụgbọelu na njikwa ọkwa na njikwa. Ejiri nnukwu Bulldozer na-arụ ọrụ na TYS165-3 ...
TYS165-3 bulldozer bụ 165 horsepower track-type dozer na hydraulic kpọmkwem draịva, ọkara-isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik na-enyere aka na-arụ ọrụ, ọkwọ ụgbọ mmiri na-anya ụgbọelu na njikwa ọkwa na njikwa.
A na-eji Bulldozer TYS165-3 mara nke ọma, ọhụụ na-emeghe, nhazi kachasị, arụmọrụ dị mfe na ọrụ yana ọnụ ala na ntụkwasị obi zuru oke. Ọ bụ nkwalite ngwaahịa na ndabere nke TYS165-2 bulldozer.
Ọrụ ọrụ (gụnyere ripper) (Kg): 18300
Nsogbu ala (gụnyere ripper) (KPa): 28.2
Nkeji nkwụsị ala (mm): 375
N'ozuzu ya (mm): 558542223190
Pịnye: wingdị swing ụdị beam.
Obosara akpụkpọ ụkwụ (mm): 1000
Mmepụta sistemụ L / min: 190
Nke gara aga: TS160-3 Bulldozer